Rating: SKU: 541-15-1. Category: Ọla abụba
Usoro Molecular: C7H15NO3
Molekụla arọ: 161.2
Melt Point: 197-212 Celsius
(1) Acetyl-L-Carnitine: formdị a kachasị mma maka ahụike na ọrụ ụbụrụ. Ọnụọgụ dị iche site na 600-2,500 mg kwa ụbọchị.
(2) L-Carnitine L-Tartrate: formdị a kachasị dị irè maka mmega ahụ. Ọnụọgụ dị iche site na 1,000-4,000 mg kwa ụbọchị.
(3) Propionyl-L-Carnitine: formdị a kachasị mma iji meziwanye ọbara na ndị nwere ọbara mgbali elu ma ọ bụ ọnọdụ ahụike metụtara ya. Osdị dị iche site na 400-1,000 mg kwa ụbọchị.
Otu nnyocha nyochara nchekwa L-carnitine site n'inye ndị otu gram 3 kwa ụbọchị maka ụbọchị 21. E mere ndokwa ọbara sara mbara maka onye ọ bụla so na ya na mbido na njedebe nke ọmụmụ ihe ahụ, ọ nweghịkwa mmetụta na-adịghị mma a hụrụ.
Esi zụta L-carnitine ntụ ntụ si AASraw